Noho ny anaranareo efa voasoratra any an-danitra no ifalio
Naseho ny : 3 oktobra 2020
Sabotsy 03 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-26 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 10, 17-24 — Misaotra Anao Aho, ry Ray, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin’ny madinika ny tsiambaratelon’ny fanjakanao.
Ry kristianina havana, nitatitra ny asa vitany tamin'ny nanirahan'i Kristy azy ny mpianatra roa amby fitopolo lahy. Angatahana amintsika isan'andro izany na matetika, manao jery todika ny fiainana. Ny fahefana voalohany nomen'i Jesoa ny mpianany eo am-panirahana azy ireo, ny fahefana handroaka demony. Io faharesen'ny demony, noho ny Anaran'i Jesoa io, no tatitra voalohany nataon'izy ireo tamin-kafaliana. Resy ny demony, dikan'izany, manomboka eo ny fanjakan'Andriamanitra. Afaka miaina an-kalalahana ny zanak'Andriamanitra, kanefa tsy maintsy miambina lalandava fa mitady hirika foana ny demony handavoana antsika, ary atodik'i Jesoa any amin'izay lanitra itodihantsika izay ny hafalian'ny mpianatra.
Ankilan'izay, nientan-kafaliana koa i Jesoa, nisaotra an'Andriamanitra Ray noho ny nifidianany ny madinika, hanambarana ny sitrapony, izany hoe, ho an'i Jesoa, ho an'Andriamanitra, tsy izay mahay akory no masina ; tsy saina na fahaizana, fa fo sy fitiavana no miteraka sy iainana ny finoana. Aoka koa hientan-kafaliana amin'ny Fanahy Masina isan'andro isika, hisaotra ny Ray noho ny fitiavany, noho ny fanomezany. Ary aoka hampitony ny hambo sy hampandefitra ny saina be, fa hanokatra ny fo mba hanjakan'Andriamanitra. Amen.